समाचार Archives - Page 877 of 882 - SangaloKhabar
राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापा निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा अध्याधिक बहुमतले निर्वाचित भएका छन् । प्रदीपविक्रम राणालाई हराउँदै थापा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । थापाले २ हजार ८०४ मत पाएका छन् भने उनका प्रतिद्वन्द्वी राणाले २५१ मत पाएको नेता राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए । राप्रपा अध्यक्ष चयनका लागि भएको मतदानमा कुल ३ हजार १३६ मत खसेको थियो, जसमध्ये ८१ मत भने बदर भएको छ । महाधिवेशनको पूर्व...
राप्रपा अध्यक्षका लागि मतदान सुरु, थापा र राणा चुनावी मैदानमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशमा अध्यक्ष चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ । अध्यक्षका लागि कमल थापा र प्रदिपविक्रम राणा चुनावी मैदानमा छन् । पहिलो भोट अध्यक्षका उम्मेदवार राणाले खसाले भने लगतै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मतदान गरेका छन् । राणा काठमाडौं ७ का क्षेत्रीय सभापति हुन् । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी निकट राणाको उम्मेदवारीले थापालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएको...
नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा जागिर खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले ७५ जना कर्मचारीको लागि खुला दरखास्त मागेको छ । विभिन्न पदमा पूर्तिका लागि थप ५२ जनालाई करारमा बरिष्ठ अधिकृतमा भर्ना गर्न लागिएको छ । आज एक विज्ञापन प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले खुलतर्फ उपनिर्देशक तथा प्रवन्धकदेखि सहायकसम्मका पददमा दरखास्त मागेको हो । करारको छुट्टै सूचना पनि प्राधिकरणले निकालेको छ । विभिन्न प्रशाशनिक तथा प्राविधिक पदहरुमा पनि उसले जागिर...
हिरासतबाटै थुनुवा भागे, पाँच प्रहरी कारबाहीमा
बैतडी – चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका एक थुनुवा दार्चुला प्रहरीको हिरासतबाटै शनिबार फरार भएका छन् । फरार हुने दार्चुला सुनसेरा –३ का २९ वर्षीय धनसिंह विष्ट रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक केदार खनालले जानकारी दिए । दार्चुलाको सुनसेरामा माघ २३ गते चोरी गरी फरार रहेका विष्टलाई प्रहरीले माघ २४ गते सदरमबुकाम खलङ्गाबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो । जिल्ला प्रहरी का...
प्रहरी महानिरीक्षक विवादमा सर्वोच्चमा बहस हुन सकेन
काठमाडौं । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बहस हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेश तोकिएको थियो । तर, प्रतिवादी चन्दको नाममा म्याद तामेली नै नभएको पाइएपछि सुनुवाइ हुन सकेन । अब आजै म्याद तामेली हुने र मंगलबार बहस हुने रिट निवेदक कपिलदेव ढकालले बताए । ढकालले दायर गरेको रिटमा स...
काठमाडौं । विभिन्न कार्यक्रम गरेर आज ६७ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै छ । २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएकाे छ । एक सय चार वर्षे जहानियाँ राणा शासनको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गरी राणा शासकले जनतासमक्ष घुँडा टेक्न बाध्य बनाएर प्रजातन्त्र स्थापना भएकाे थियाे । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र नेपाली काँग्रेस सम्...
Previous 1 … 876 877 878 … 882 Next